Echiche Foto Ezumike 3D Ezumike - LucidPix
Obi abụọ adịghị ya na oge ọkọchị bụ oge kachasị mma maka ndị na-ese foto. Ebe ihu igwe zuru oke na ogologo elekere, enwere ọtụtụ ohere inyocha na ịnwale echiche foto. Ọ bụrụ n’ị na-achọ ịkọ usoro ọhụụ ịse foto n'oge ọkọchị a, anyị na-akwado na-amụta otu esi emezi ihe osise 3D na LucidPix! Iji nyere gị aka ibido, nke a bụ nchịkọta nke echiche 3D kacha acha anụnụ anụnụ nke XNUMXD ị ga - achọ ịgbakwunye na ndepụta gị ga - ejide oge a.
Ndụ Ndụ Foto
Na-ese foto nke ndụ ka ọ bụ ụzọ dị mma iji mụta nkà foto gị, ebe enwere ọtụtụ ohere ịse foto. Ọbụna na ihe ị dinara n'ụlọ, ịnwere ike ịhazi usoro nke okooko osisi, mkpụrụ osisi, ihe ọ drinksụ drinksụ na ihe ndozi oge ọkọchị. Mma nke oge ọkọchị bụ na ịnwere ike were nke gị ka foto ndu n’ime ụlọ gị, ma ọ bụ n’èzí n’azụ ụlọ gị! Ozokwa, iwere nke gi ka foto ndu di na 3D ga - ewetara foto gị nke pụrụ iche na mmegharị ọ ga - enye gị ohere iwebata oge ahụ.
Foto nri Nri
Ọ bụrụ na ọ dị otu ihe eji amata n’oge ọkọchị, ọ bụ ọgwụgwọ niile dị ụtọ ị nwere ike iri n’oge! Site na nkpuru osisi dika mango na strawberries, rue ihe ichoro di iche iche dika popsicles ma obu ihe oriri slushie, inye onyinye n’oge udu ọtụtụ ndị mara mma na-emeso. Ọ bụghị naanị na usoro ọgwụgwọ ndị a na-emeju agụụ gị, mana ha nwere ike ije ozi dị ka nnukwu isiokwu maka foto 3D gị!
Ya mere kpoo ogwu ndi okacha amara nke gi kari puru iche n’ebe ezumike ma obu azu azu. Hazie nri gị na ihe ọ drinksụ drinksụ gị na-ezighi ezi na blanketị pịlị ma ọ bụ ahịhịa ndụ wee weghara foto 3D gị. Guo nke anyi blog post ma ọ bụ lelee anyị YouTube video mụta otu esi emepụta foto nri dị ịtụnanya na 3D.
Foto Ọpụpụ Ọpụpụ
Ichere ogologo oge ihu igwe n'oge ọkọchị na-abịa ohere karịa ịnọpụ n'èzí weghara foto. Oge ezumike bụ oge kachasị mma iji were oke ihu igwe wee gaa hiking ma ọ bụ maa ụlọikwuu na a ogige ntụrụndụ steeti dị nso. Anyị na-akwado ndoro isi n'èzí n'isi ụtụtụ ma ọ bụ na mgbede iji wepụta agba gbara agba nke ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ.
Na mgbakwunye inweta ịnweta ọkụ dị nro n'oge ọla edo, ị nwekwara ike ịnọ ogologo oge iji weghara foto gị n'oge acha anụnụ anụnụ, nke bụ oge chi jiri n’anyanwụ n’okpuru mbara igwe na mbara igwe na-enweta ndò dị omimi. Maka ndepụta nke ndụmọdụ iji zụkọta foto dị elu na LucidPix, lelee anyị edemede ebe a.
Gendị foto ọzọ zuru oke maka oge ọkọchị, foto mmiri bụ ụzọ dị mma iji mụta usoro foto ọhụụ. Gaa isi iyi ọdọ mmiri, osimiri, ma ọ bụ ọdọ mmiri dị nso ma jide ebe mmiri na-adọrọ adọrọ ka ìhè anyanwụ na-agafe na ebili mmiri. Nwekwara ike pụọ na mpaghara nkasi obi gị wee weghara foto gị n'okpuru mmiri! Naanị jide n'aka na ịzụta a igwefoto anaghị egbochi mmiri or ikpe ekwentị mbụ!
Otu echiche foto oge ọkọchị dị mma maka ijide mmiri na-agagharị bụ iji foto ngosi ogologo oge. Foto ngosi ogologo ga-enyere gị aka ịmepụta mmetụta dị nro, nke mmiri na-agagharị na foto gị, na ịmegharị foto ndị a na 3D ga-eme ka ọ dị ka mmiri nke foto gị na-enwu site na ihuenyo! Lelee ụfọdụ ndụmọdụ maka ijide foto mkpado ogologo Ebe a.
5 Parallax Effective iPhone ngwa iji bulite foto gị →← Atụmatụ Esere Ese Agbaghara Nke Etiti